Huawei S5700 Series Inochinja Vagadziri | China Huawei S5700 Series Swichi Fekitori & Vatengesi
S5720-SI Series Shanduko
Flexible Gigabit Ethernet switch dzinopa dzakashinga, dzakakwirira-density Rukoko 3 switching kune data nzvimbo. Zvimiro zvinosanganisira akawanda-matemu, HD vhidhiyo yekuongorora, uye vhidhiyo musangano musangano. Akangwara iStack kusanganisa, 10 Gbit / s kumusoro kwenzvimbo uye IPv6 kuendesa kunogonesa kushandiswa sekubatanidza switch mumabhizinesi emakampasi network.
Inotevera-chizvarwa kuvimbika, chengetedzo, uye magetsi-ekuchengetedza matekinoroji anoita S5720-SI Series Swichi nyore kuisa nekuchengetedza, uye yakanakisa sosi yeakaderera Mutengo Wese weUridzi (TCO).
S5720-LI Series Shanduko
Iyo S5720-LI nhepfenyuro magetsi-anoponesa gigabit Ethernet switch dzinopa dzinochinjika GE yekupinda madoko uye 10 GE uplink madoko.
Kuvakira padanho repamusoro-soro rekushandisa, chitoro-uye-kumberi nzira, uye Huawei Yakashandura nzira yekushandisa (Platform), iyo S5720-LI nhepfenyuro inotsigira akangwara Stack (iStack), inoshanduka Ethernet networking, uye dzakasiyana siyana chengetedzo. Ivo vanopa vatengi vane girini, nyore-kugadzirisa, nyore-kuwedzera, uye inodhura-inoshanda gigabit kune desktop desktop.
Huawei s5720-hi akateedzana switch
Huawei S5720-EI nhepfenyuro inopa inoshanduka yese-gigabit kuwana uye yakagadziridzwa 10 GE uplink port scalability. Ivo anoshandiswa zvakanyanya sekupinda / kuunganidzwa switch mumabhizinesi emakampasi network kana gigabit yekuwana switch mune data nzvimbo.
S5720-EI Series Shanduko
Huawei s5700-si akateedzana switch
Iyo S5700-SI yakateedzana ndeye gigabit Layer 3 Ethernet switch inoenderana nechizvarwa chitsva chepamusoro-performance Hardware neHuawei Versatile Routing Platform (VRP). Inopa hukuru hukuru hwekushandura, yakanyanya-density GE maficha, uye 10GE uplink maficha. Iine yakakura sevhisi maficha uye IPv6 yekufambisira kugona, iyo S5700-SI inoshanda kune akasiyana mamiriro. Semuenzaniso, inogona kushandiswa senzira yekuwana kana yekubatanidza switch pane kambasi network kana chinja chekuwana munzvimbo dzematare. Iyo S5700-SI inosanganisa matekinoroji mazhinji epamberi maererano nekuvimbika, chengetedzo, uye simba rekuchengetedza. Iyo inoshandisa zvakapusa uye nyore nzira dzekuisa uye kugadzirisa kudzikisa vatengi 'OAM mutengo uye kubatsira vebhizinesi vatengi kuvaka inotevera-chizvarwa IT network.
HUAWEI S5700-LI Shanduko
Iyo S5700-LI inotevera-chizvarwa simba-rinoponesa gigabit Ethernet switch iyo inopa inochinjika GE yekupinda madoko uye 10GE uplink chiteshi. Kuvaka pane chinotevera-chizvarwa, yepamusoro-performance Hardware uye iyo Huawei Versatile Routing Platform (VRP), iyo S5700-LI inotsigira Advanced Hibernation Management (AHM), akangwara stack (iStack), inoshanduka Ethernet networking, uye dzakasiyana siyana chengetedzo. Inopa vatengi girini, nyore-kubata, nyore-kuwedzera, uye inodhura-inoshanda gigabit kune desktop desktop. Uye zvakare, Huawei inogadzirisa mamodheru akasarudzika kusangana nezvinodiwa nevatengi kuti zvienderane nezviitiko zvakakosha.
Huawei S5700-HI akateedzera ari epamberi gigabit Ethernet switch dzinopa zvinoshanduka gigabit kuwana uye 10G / 40G uplink zviteshi. Leveraging chinotevera-chizvarwa, yepamusoro-inoshanda Hardware uye Huawei Anowanza Routing Platform (VRP), S5700-HI akateedzana switch dzinopa yakanakisa NetStream-powered network traffic ongororo, inoshanduka Ethernet networking, yakazara VPN tunneling matekinoroji, akasiyana siyana chengetedzo kudzora nzira, akakura IPv6 maficha, uye nyore manejimendi uye O&M. Zvese izvi maficha zvinogadzira iyo S5700-HI nhevedzano yakanakira kuwana pane dhata nzvimbo uye yakakura- uye yepakati-saizi saizi kambasi network uye kuunganidzwa pamadiki macampus network.
Huawei s5700-ei akateedzana switch
Iyo S5700-EI yakateedzana gigabit bhizinesi switch (S5700-EI) anotevera-chizvarwa magetsi-ekuchengetedza switch inoitwa neHuawei kuzadzisa chinodikanwa chepamusoro-bandwidth kuwana uye Ethernet yakawanda-sevhisi kusangana. Zvichienderana neyekucheka-kumucheto Hardware uye Huawei Versatile Routing Platform (VRP) software, iyo S5700-EI inopa yakakura switching kugona uye yakakwira-density density GE madoko ekushandisa 10 Gbit / s kumusoro kwerwizi kufambisa. Iyo S5700-EI ndeyekushandisa mune akasiyana bhizinesi network zviitiko. Semuenzaniso, inogona kushanda senge yekuwana kana yekubatanidza switch pane kambasi kambasi, gigabit switch switch muInternet data Center (IDC), kana switch yedesktop kuti ipe 1000 Mbit / s kuwana ma terminals. Iyo S5700-EI iri nyore kuisa nekuchengetedza, kudzikamisa mitoro yebasa pakuronga kwenetiweki, kuvaka, uye kugadzirisa. Iyo S5700-EI inoshandisa kuvimbika kwepamberi, chengetedzo, uye magetsi ekuchengetedza matekinoroji, kubatsira vatengi vebhizinesi kuvaka
chizvarwa chinotevera IT network.
Ongorora: S5700-EI yakataurwa mugwaro iri inoreva iyo yese S5700-EI nhevedzano inosanganisira S5710-EI, uye tsananguro nezve S5710-EI akasiyana maficha eS5710-EI.
Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Huawei Olt Mutengo, Huawei Qsfp +, Xfp Transceiver, Sfp C ++,